Guddiga Doorashada Koofur Galbeed oo 2 todobaad dib u dhgay Doorashada Madaxweynaha – Kalfadhi
Guddiga Doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed ayaa War Saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay iney Doorashada Koofur Galbeed dib u dhacday 14 maalin oo kale. Markii hore waxa uu qorshuhu ahaa iney dhacdo 5-ta bishan Diseembar, oo Arbacada soo socota ku beegan. Waa markii 3-aad oo ay dib u dhacayso muddo 2 bil gudahood ah. 19-ka bishan ayuu Guddigu sheegay iney ugu dambeyn doorashadu ka dhici doonto Baydhaba.
Hawlaha cul-culus ee Guddiga hor yaala iyo gaabida waqtiga ayey Guddigu warkooda qoran ku sheegeen ineysan saamaxeyn qabashada Doorashadaas waqtigii horay loo qorsheeyey. “Markii uu Guddigu ogaaday in Hay’adaha Caalamiga ah iyo Marti-sharaftii loogu talagalay iney goobjoog ka ahaadaan Doorashada in aysan ku wada imaan karin waqtigii loo cayimay Doorashada ayaan dib u dhignay” ayaa lagu yiri warka qoraalka ah ee ay soo saareen Guddigu.
Sidoo kale, Guddigu waxa uu ku sababeeyay dib u dhaca qabsoomidda Doorashada Madaxweynaha Koofur Galbeed in aysan Guddiga ruuxoodu helin agabkii iyo tababarradii ay u baahnaayeen, si ay shaqo dheelli-tiran oo hagaagsan u qabtaan. “Taasina waxay keentay” buu yiri Guddigu “in ay doorashadu ka dib dhacdo waqtigii horay loogu dhawaaqay”.
“Sidaasdarteed, waxa uu Guddiga Qabanqaabada Doorashada Madaxweynaha Koofurgalbeed garwaaqsaday iney lagama maarmaan tahay in waqtigii ay doorashadu dhici lahayd dib looga dhigo” ayuu yiri Guddiga Doorashada Madaweynaha Koofurgalbeed.
Qoraalka Guddiga waxaa Musharaxiinta Madaxweynaha Koofurgalbeed looga raalli-geliyay dib u dhaca, iyada oo warka Guddiga lagu sheegay inuusan dib u dhacaasi ahayn karti xumi ee ay tahay arrin ay duruufi keentay. “Sidoo kale” ayaa lagu yiri qoraalka “waxaa sidiisii ahaan doona Hab-raaca Doorashada, isla markaana waxaan dib ka iclaamin doonnaa hadal-jeedinta Musharaxiinta”.
Warqadda Guddiga Doorashada Koofur Galbeed ee Dib-u-dhista Doorashada